Silaanyo oo ubadkii Somaliland ka iibinaya Saudiga si ay dagaalka Yemen uugu dhintaan by Abdi Mustafe‏
Silaanyo oo ubadkii Somaliland ka iibinaya Saudiga si ay dagaalka Yemen uugu dhintaan by Abdi Mustafe‏ 0 July 01, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 1019
Silaanyo oo ubadkii Somaliland ka iibinaya Saudiga si ay dagaalka Yemen uugu dhintaan by Abdi Mustafe‏ Nin
baa laga hayay hooyadeen indha la'an ma ku ogayd, dad cun nimana wey ku
darsatay. Hadaba Silaanyo iyo qoys kiisa hanti boob iyo lacag lunsi ma ku ogayd, waxay ku darsadeen in ubadka reer Somaliland inta Saudiga lacag lagaga qaato ay dagaalka Yemen iyo Saudiga u dhexeeya ku dhintaan.
Weliba diinta islaamku wey ka soo hor jeedaa in laba dal oo muslin ah loo kala hiiliyo oo qofkii ku dhintaa waa ehlu naar. Sulux ama dhex-dhexaadin baa ka banaan oo keliya. Hadaba Silaanyo iyo qoys kiisa oon qoyayn iyagoo lunsaday malaayiin dollar ayaa hunguri u geeyey inay ubadka reer Somaliland intay qarash ku qaataan ay dabka saaraan. Culimadadalka waajib baa ka saaran in ay ka hadlaan diin xumida dowladu
wado ee dhalin yarada laga dhigayo ciidan calooshooda u shaqeys tooyin ah oo ku madhan doona dagaalkaa Yemen uu Saudigu ku qaaday. Saudigu dooni maayo in dad kiisu ku dhin taan kana yeeli maayaan ee wuxuu doonayaa in dad ajanebi ihi dhulka uuga dagaalamaan oo looma ooyaan ihi.
Ciidmada Somaliland looga qorayo inay Saudiga u dagaalamaan waa gumaysi
ay horseed ka tahay madaxtooyada oo beryahan siday wax u wadaan ay u muuqato hadaan la kicin oon la iska qaban in lagu kala guuri.